01 | juillet | 2019 | InfoKmada
EDITO du 01 juillet 2019
InfoKmada - 1 juillet 2019 0
Niavaka sy mendrika ny fankalazana ny faha-59 taona niverenan'ny fahaleovantena. Ho tafita amin'ny dingana manaraka amin'ny CAN 2019 ny Barea. 16 no namoy ny ainy, ampolony maro ireo naratra vokatry ny fifanosehana tetsy Mahamasina ny andron'ny 26 jona, izay noraisin'ny fitondram-panjakana an-tanana avokoa ny fitsaboana ny maratra sy ny fikarakarana ireo namoy aina. Tantely amam-bahona tokoa ny fiainana.
Fampiharana ny lalànan’ny fifaninanana : antoky ny fivoaran’ny toekarena
Antoky ny fivoaran’ny toekarena ny fampiharana amin’ny tokony ho izy ny lalànan’ny fifaninana eo amin’ny sehatra ara-barotra. Mbola maro amin’ireo mpandraharaha anefa no tsy mampihatra izany raha ny fanazavan’ny tomponandraikitra eo anivon’ny filankevitry ny fifaninanana.
Filankevitry ny minisitra : niompana tamin’ny « recouvrement des avoirs illicites »
Niompana tamin'ny fahafahana mitaky sy mangeja ary mamerina ireo vola azo amin'ny fomba tsy manara-dalàna ny filankevitry ny minisitra notanterahina omaly. Nisy araka izany ny ny didy hitsivolana notapahana mamaritra ny "recouvrement des avoirs illicites".
Fifidianana kaominaly : ho tontosaina ny Alatsinainy faha-28 oktobra 2019
Miankina amin'ny isan'ny mponina sy ny isan'ny mpanolotsaina ao aminy no handoavan'ireo kandida hilatsaka ho ben'ny tanàna ny tetibola tokony haloa amin'izany. Ndeha harahintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity ny andininy mahakasika izay.
Barea de Madagascar : manana tombony hiakarana amin’ny dingana manaraka
Ambony ny erjika hiakarana amin’ny dingan’ny 1/8 n-dalana ho an’ny Barea de Madagascar taorian’ny fandresena an’i Burundi. Ny lalao hihaonan’i Barea amin’i Nigeria amin’ny Alahady ho avy izao no hamaritra ny laharana voalohany ao amin’ny vondrona B.
Ny Alatsinainy faha-28 oktobra ho avy izao ny volavolana datin’andro natolotry ny Vaomiera Mahaleotena misahana ny Fifidianana hanatontosana ny fifidianana kaominaly eto amintsika.
Voka-pifidianana ofisialy : amin’ny faha-2 jolay izao
Amin’ny Talata faha-2 jolay izao no hamoaka ny vokatra ofisialy tamin’ny fifidianana Solombavambahoaka notontosaina tamin’ny Alatsinainy faha-27 may lasa teo ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana.
Fitiliana VIH – SIDA : sakana ny henatra
Isany antony mampitombo tsy ahafahana manampy ireo olona mitondra ny tsimokaretina VIH SIDA ny henatra. Maro amin’izy ireo raha ny fanazavana azo no manafina ny aretiny, ary maro ihany koa no tsy mahafantatra ny fisian’izany ao anatiny akory.